Faarax C/qaadir oo ku guda jira in uu Kenya iyo Kooxda Kablalax Kismaayo u Saxiixo!
Ibrahim Hassan - Mudane Madaxweyne, Xasan Shiikh Moxamuud, Ma Ogtahay in uu xilweyn kaa saaranyahay ilaalinta qaranimada iyo Dhamaan Dalka Soomaaliya maadaama aad sheegtit in Soomaaliya ay tahay Dal xor ah oo Madaxbanaan, adna aad Madaxweyne u tahay.
Ma Ogtahay haddii aad heshiis la gashid Axmed Madoobe iyo Kooxda Kablalax ee ka soo duulay kuna wada dhashay Itoobiya iyo Kenya inaad qaranimadii Soomaaliya ka tanaasushay. Ma garowsantahay in aad ku tumatay Qaranimadii Soomaaliya?
Ma Ogtahay in aad Hoosaasisay Bulshaweynta Nabada Jecel oo u baahan Cadaaladda, si aysan u sameenin Habayaraatee dhaqdhaqaaq ay ku Difaacanayaan Degaankooda, Hantidooda iyo Dadnimadooda.
Waxaad ilaa Maanta ka dhaadhicin la'adahay Beesha Caalamka in Kismaayo iyo Gobollada Jubooyinku ay ka tirsanyihiin Somalia oo ah dal xor ah, kuwa ku soo duulay ee qabsadayna ay yihiin kuwo dhaqan ahaan kasoo jeeda Kenya iyo Itoobiya sidaas daraadeed aan u dhalan Somalia.
Waa inaad Bulshada Deegaanada Jubbooyinka u diyaarisaa sidii loo xorrayn lahaa Kismaayo iyo Jubooyinka haddii beesha caalamku ku fashilanto inay Kismaayo iyo Jubooyinka ka saarto Ciidamada Kenya, Milliishiyada Kooxda Kablalax ee Gaarissa, Garoowe iyo Jigjiga kasoo duulay.
Waxaan u aragnaa inay Jariimo Qaran tahay in lala fariisto ama la Aqoonsado Axmed Madoobe iyo Kooxdiisha oo ay dabada ka riixeyso Kenya iyo Itoobiya si loo kala dhantaalo qaranimada Somalia iyo wadajirka Dalkeeda. Ha ka gelin taariikhda baal madow.
Haddii aad aqoonsato Axmed Madoobe ogow in Somalia ay burburayso oo aanay jiridoonin Qaranimada aad Maantay Hogaanka u tahay, ogow inaad adigu Mas'uul ka noqondoontit Burburkaas taariikheed.
Shacabka Somalia waa inuu fadhiga ka kacaa oo ka dhiidhiyaa dalkiisa la kala boobayo, qaranimadiisa la burburinayo, wadaninimadiisana loo gefayo. Waa inaad ku qasabtaan Madaxweyne Xasan Shiikh Moxamuud in uusan kala dhantaalin qaranimada Somalia oo uusan sadaqo u bixin Gobollada Jubbooyinka Soomaaliya.
Waa inaad shacabyahow ku qasabtaan Madaxweyne Xasan Sh. Maxamuud inuu deg deg u joojiyo wadahadalada lala leeyahay Kooxda Axmed Madoobe ee ka socda Addis Ababa. Wasiirka Madaxtooyada, Mudane Faarax Cabdulqaadir ee Wadahadalada Addis Ababa daadihinaya waa Nin aan Laxawgiina dareemeen, waa Nin aan Kufsiga, Billiliqada iyo Dhaca, Dilka ay ku hayaan Kooxda Kabalalax iyo Ciidamada Kenya reer Kismaayo aan dareenkeeda laheyn oo aan u danqaneen. Ogaadaa shacab ayaa badbaadiyaa dalkiisa iyo qaranimadiisa.
Kuwa dibeda jooga iyo kuwa gudaha joogaba waa inay fadhiga ka kacaan kana dhaadhiciyaa Adduunka in waxa Jubbooyinka ka socda lagu burburinayo qaranimada Somalia laguna kala dhantaalao wadajirka dhulkeeda. Maanta Somala waxaa ay maraysaa meeshii ay ku burburi lahayd ama ku badbaadi lahayd.
Saxaafadda Somalia waa inay u kala cadyihiin siyaasadda iyo wadaninimada, waa inay wax kasta ka hormarisaa wadaninimada oo u sarajoogsataa wax ka badbaadinta qaranka iyo dhulka Somalia, waa inay tooshka ku ifisaa kuwa Doollarku Shisheeye Maandooriyay oo hadba Hotel loo kaxeesto si looga dhigto Dube lagu burburiyo Somalia.
Saxaafaddu waa inay hormood u noqotaa xilligan adag ee lagu badbaadinayo qaranimada iyo dhulka Somalia.
Aragtida: Ibrahim Hassan Moxamed